Monaco Oo Eriday Tababare Ranieri
HomeFranceMonaco Oo Eriday Tababare Ranieri
Gudoomiye xigeenka naadiga Monaco, Vadim Vasilyev ayaa shaaca ka qaaday in kooxdiisu fasaxday tababarihii naadiga ee Claudio Ranieri kooxdana uu ka tagayo.
Ranieri oo jagadan qabtay sanadkii 2012-kii ayaa kooxda ka soo saaray horyaalka derajada labaad ee Ligue 2, isla markaana ku soo daray meel fiicana ka gaadh siiyey kooxda horyaalka heerka koowaad ee wadanka France ee Ligue 1.
Xili ciyaareedkan kooxda Monaco ayaa u soo baxday horyaalka Yurub ee Champions League kadib markii ay kaalinta labaad ku dhamaysatay horyaalka, 9 dhibcoodna ka hooseysay naadiga horyaalka Hantiyey ee Paris Saint-Germain.
“Waxaan idiin cadaynayaa in Ranieri uu ka tagayo Monaco,” ayuu saxaafada ku yidhi gudoomiye ku xigeen Vasilyev oo shir jaraa;id qabtay.
“Waxaan doonayaa inaan uga mahad celiyo Claudio shaqadii aadka u fiicnayd ee uu naadiga u soo qabtay.
“Waxay ahayd go’aan aad u adag. Marna ma fududa in naadi laga soo saaro Ligue 2 oo la keeno Champions League. Laakiin waxaanu rumaysanahay in marxaladan aanu u baahanahay dab dhaliye cusub.”
Vasilyev wuxuu intaas ku daray in shaqsiga bedelaya Ranieri uu noqon doono mid kooxda ku ciyaarsiin doona qaab weerar u badan, wuxuuse ka gaab saday inuu sheego ama carabaabo magaca tababaraha cusub ee ay booska keenayaan.
“Idiinma xaqiijin karo magaca tababaraha cusub, anaga ayaa wali ay noo socdaan wadahadalada arintaasi, laakiin waxaanu doonaynaa qof kubad weerar ah ku ciyaari kara taas oo ah hanaanka ay ku raaxaystaan taagteerayaashayadu.”
Demba Ba: Mourinho Wuu I Quudhsan Jiray
Goolhaye Buffon Oo Ciyaarta Caawa Ee England Ka Maqnaanaya Italy